Ny lalao karazana Fall Guys tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Ny lalao Fall Guys tsara indrindra ho an'ny Android
Saika mampatahotra ny manana hevitra mamaky tany ary avoaka amin'ny lalao tsy misy teti-bola ampy handaniana amin'ny dokam-barotra sy ny varotra, ary noho izany, na dia adika amin'ny klon maro aza dia azonao atao ny manatona an'io mpanatrika manome anao elatra ampy hahatongavana ho Vady Lavo na Lohasaha Stardew.
Andao hiaraka amin'ny lalao Fall Guys tsara indrindra ho an'ny Android ary tao anatin'ny volana maromaro, hatramin'ny fahavaratra, dia nivoaka toy ny tsimparifary manala ny fototr'ity lalao ity izy izay azon'ny fandinihana miandraikitra ny fampandrosoana nataon'i Epic Games herinandro lasa izay. Ataovy.
5 Fahalavoana mihosin-drambo: Haingàna haingana ary sorohy ny loza!
6 Fomba maty moana: maherifo
7 kintana hex
8 be rivotra Slider
9 Ultimate Fall Ry namana
10 Ry zalahy mihazakazaka: Knockout Royale
11 Party Royale: Aza lavo!
12 Soda ry zalahy
13 Fall Boys: Multiplayer amin'ny fifaninanana hazakazaka farany
14 Lehilahy volom-borona - Knockout Ultimaten
Y eo am-piandrasana ny fahatongavan'ireo Fall Guys amin'ny Android amin'ny fotoana irayRaha eo am-pamolavolana azy, dia hiaraka amin'ity iray ity isika, ny voalohany amin'ny lisitry ny lalao karazana Fall Guys. Eto isika dia miditra milalao mpilalao 32 amin'ny sari-tany na kianja lehibe izay misy fitaovam-piadiana sy fiadiana isan-karazany hampiasaina hiarovana ny tenantsika amin'ny hafa. Ny tsara indrindra amin'izy rehetra lalao maharitra minitra vitsy. Fomba fijery Isometrika ho akaiky kokoa ny Battle Royale noho ny Fall Guys, saingy afaka izany.
Raha izany dia mitovy kokoa amin'ny Fall Guys ary manolotra multiplayer ihany koa mba hahafahanao manana fotoana mahafinaritra amin'ireo fotoana mampihomehy izay omen'ity karazana lalao ity matetika. Indrindra fa noho ny fizika sy ny fomba fitsapana ireo Yellow Humor (fandaharana amin'ny fahitalavitra 90's amin'ny Tele 5) izay nahafinaritra tokoa. Manolotra antsika lalao telo lalao: fanamby, fomba hiaka sy ny fomba fanoherana ny hafa. Afaka mandroso hiatrika mpilalao marobe isika.
Developer: Crystal Pug Pty Ltd.
Azonao atao izany manasongadina Noodleman.io dia ny fahafahany manolotra multiplayer na amin'ny eo an-toerana sy an-tserasera, ka mety ho izany lalao tonga lafatra ho an'ny mobiles roa rehefa ao an-trano isika. Izy io koa dia manana fizika zava-mahaliana sy famolavolana toetra adaladala toy ny lalao novidian'ny Epic Games ankehitriny. Izy io aza dia misy bibikely izay mamela antsika hihomehy akory amin'ny fotoana sasany, araka ny hevitry ny mpilalao sasany. Maimaimpoana toy ny ankamaroan'ny lalao amin'ity lisitra ity.
Noodleman.io - Lalao antoko ady
eto miditra lalao 39-mpilalao izahay izay tsy maintsy hamaranantsika voalohany ary hamela ny sisa tsy ho amin'ilay hazakazaka ho amin'ny fandresena. Tsy nijanona tamin'ny fampiasana ny Fahalavoana izy ireo mba hahafantarana ny tenany, ary izany dia noho ny faniriana ho afaka milalao lalao toy ny Fall Guys, ity lisitr'ireo klone ity dia tsy mijanona hisarika ny saina. Ary miresaka lalao izay mahatratra hevitra an'aliny na ana hetsiny izahay. Izy io dia efa manana multiplayer ho iray amin'ireo fanavaozana izay tonga taty aoriana noho ny tamin'ny fotoana namoahana azy, noho izany dia tsy misy na inona na inona.
Fall Dudes (fidirana voalohany)
Fahalavoana mihosin-drambo: Haingàna haingana ary sorohy ny loza!
Ary izao mandeha any amin'ny iray amin'ireo misy tsikera maherin'ny 100.000 izahay, fa izany dia lavitra lavitra ny multiplayer ho mpilalao tokana lalao Fall Guys. Mazava ho azy, tsy maintsy misoroka sakana am-polony ianao mba hahafahan'ny mpihetsiketsika sariaka mivoaka amin'ireo ambaratonga ireo amin'ny fomba tena miasa tsara ka sarotra ny mandresy azy ireo. Lalao ho an'ny sokajin-taona rehetra tsy azonao adinoina, na dia tsy ho hitanao aza ny multiplayer sy ireo toetra adaladala misy fizika zavatra.
Developer: INONA (lalao)
Fomba maty moana: maherifo
Handray multiplayer indray izahay amin'ny lalao ambaratonga izay tantaninay maherifo amin'ny endrika mahatsikaiky sy izany hiatrika ny AI na Artigence Intelligence an'ny lalao isika. Izany hoe tsy maintsy misoroka sakana isika, mitsambikina ary mihetsika amin'ny fotoana marina mba tsy ho tototry ny mekanika isan-tsokajiny. Raha ny tokony ho izy, ny tsirairay dia noforonina tsara mba handinihana ny hetsika tsirairay ary avy eo handeha hanao fitsapana miorina amin'ny lesoka. Maimaimpoana ary na dia tsy manana fampidinana betsaka toy ny hafa aza izy io dia lalao notazonina tsara tamin'ny ambaratonga rehetra.
Iray amin'ireo bandy Fall Guys izay Eny manana multiplayer an-tserasera isika ary izany no ranomasin'ny fahafinaretana, satria izahay rehetra dia mitsambikina avy eto ka hatrany manandrana latsaka ao amin'ny kianja hexagonal izay hahafahan'izy ireo miaina velona raha mbola very ny azy ny ambiny. Afaka mandeha mamoha hoditra ianao ary miala voly amin'ny lalao izay tsy misintona sy mandinika betsaka, fa rehefa manandrana ianao dia tena hanana lalao tsara.
Developer: Studio Mandrakizay
be rivotra Slider
Manalavitra kely isika amin'ny lalao mitovy amin'izany amin'ny multiplayer, saingy manana fomba fijery mahaliana amin'ireo sary isometrika ireo mba hifantohana amin'ny fantsona izay ahalalana ny toetrantsika. Mila manararaotra ny fisondrotana sy ny fivoarana isika mba hiezahana hamita alohan'ny AI atrehantsika. Lalao miloko maro loko ary izay mandika ny hatsaran'ireo voalaza etsy ambony. Mifantoka amin'ny elo ihany koa izy io izay hanampy antsika hampiasa ny rivotra handehanana haingana kokoa. Lalao maimaim-poana tsy misy hevitra maro, fa manoro hevitra izahay avy amin'ireto andalana ireto amin'ny Androidsis.
Developer: Lalao Worth Studios
Ultimate Fall Ry namana
Tsy mazava amintsika ihany koa raha mifanohitra amin'ny mpilalao na bot isika, saingy miatrika lalao klona iray hafa an'ny mpitolona ato amin'ity lisitra ity izahay. Tsy dia mahatratra ny isa salan'isa sy ny fisintoman'ny hafa izany, saingy azontsika apetraka ao amin'ny orbitan'ny Fall Guys. Ambaratonga maro loko sy samihafa ho an'ny fahafinaretantsika.
Ry zalahy mihazakazaka: Knockout Royale
Tena tsara amin'ny sary ary miaraka amina fomba mahafinaritra, fototra iray misy fivoarana lehibe ary izay multiplayer izay mahatonga azy io ho iray amin'ireo lalaovina indrindra amin'ity lisitra ity. Tsy azontsika atao ny mandao an'ity bandy Fall Guys ity satria izy no anisan'ny tsara indrindra. Ny kilema lehibe indrindra dia ny fampifanarahana ireo lalao, izay midika fa milalao "aloka" na "matoatoa" an'ny mpilalao hafa ianao. Ny tiako holazaina dia raisin'izy ireo ny anarany ary toa gamer izy, fa bot tokoa izy. Na ahoana na ahoana, tsy midika izany hoe manana fahatsapana hilalao amin'ny hafa isika.
Party Royale: Aza lavo!
Eto isika dia manana multiplayer amin'ny fotoana tena izy hiatrehana ireo mpilalao mahatsikaiky hafa izay tena mpilalao. Izy io koa dia miasa tsara ary manana isa salanisa tsara miaraka amin'ny hevitra maherin'ny 40.000. Eny marina fa tsy maintsy vidiana ny hoditra, ary manana izany karama izany mba handresena ny sasany manokana, fa amin'ny ankapobeny dia mampientam-po satria iray amin'ireo lalao tsara indrindra ao amin'ny lisitra mba hifaninana sy hihomehy tsy an-kijanona.
Developer: Lalao Mad1
Soda ry zalahy
Eny tokoa Mampitandrina ny Soda Guys fa ny pejy amin'ny Google Play dia mitovy amin'ny Fall Guys, ho an'ny zavatra iray izany. Ary fantatr'izy ireo tsara fa nalain'izy ireo ny mekanika fototry ny lalao, na dia fananany aza ny fananany. Ka raha mitady zavatra mitovy amin'ilay voalaza etsy ambony novidian'ny Epic Games ianao dia aza mandany fotoana hanandramana azy amin'ny fizika, multiplayer amin'ny fotoana tena izy ary ireo ambaratonga izay hitsapa antsika. Na dia mbola mistery aza izany raha milalao bots na mpilalao amin'ny fotoana tena izy ...
Soda ry zalahy (fidirana aloha)
Developer: Lalao Hoptimist
Fall Boys: Multiplayer amin'ny fifaninanana hazakazaka farany
Miaraka amin'ny lalao misy mpilalao 30 dia mandeha mivantana amin'ny multiplayer amin'ny Internet isika miaraka amin'ny maody lalao 12 samihafa sy tarehin-tsoratra 51 samihafa azonao vohana. Izy io dia mety ho iray amin'ireo kopia mahaliana indrindra amin'ny lisitr'ireo Fall Guys iray manontolo, indrindra satria tsy mandany vola firy ny fihazonana ny atiny hanokatra sy satria manana endri-tsoratra marobe. Nandalo ny famerenana maherin'ny 4.000 izahay mba ho iray amin'ireo mpilalao be mpitia indrindra ary napetrak'izy ireo tamin'ny fomba tsara tao amin'ny Play Store. Mety tsy dia noforonina araka ny antenainao ny tarehin-tsoratra, fa amin'ny ankapobeny dia lalao tsara ny manantona ny hafa.
Lehilahy volom-borona - Knockout Ultimaten
Ary apetrakay amin'ny lisitra ity lalao ity satria tsy saro-kenatra amin'ny fampiasana anarana mitovy izy ireo, na dia mampiasa ny "Fur" avy amin'ny "Furries" aza izy ireo mba hananana biby fiompy sasany fa biby fiompy izy ireo na tsia. Izy io dia manana multiplayer an-tserasera, sary tsara kalitao, famaranana ara-teknika ary kely izay manakana na mandoto ny traikefa filalaovana. Marina fa tsy dia mora toy ny hafa izy io, fa vao mainka mampiditra anao ho lalao iray hafa amin'ny lalao Fall Guys izay ananantsika amin'ny finday Android.
Lehilahy volom-borona - Knockout Farany
Developer: Vertex Fox
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny lalao Fall Guys tsara indrindra ho an'ny Android